Global Voices teny Malagasy » Siria: Ity « Tafika Mahaleotena » Mihantsy Ny Fitondrana Ity · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 24 Oktobra 2011 12:27 GMT 1	 · Mpanoratra Madjid Zerrouky Nandika avylavitra
Sokajy: Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana, Syria, Ady & Fifandirana, Fanoherana, Mediam-bahoaka
Akanjo aro bàla, satroby vita tamin'ny Kevelar sy basy fitondra an'ady eny an-tànany, 13 lahy no mamakivaky ireo olona marobe mihorakoraka  miaraka amin'ny dona kely eny an-tsoroka, fiandohan'ny volana septambra, tao an-tanànan'i Boustan al-Diwan, ao Homs. Taraiky mijery ny fanamiana ny fakantsary, ireo galona kely miloko maitso eo an-tsoroka anaty tokotany mena voatapaky ny teny hoe Al quwat al khassa (« Hery Manokana »). Ho an'ireo mafàna fo avy ao an-tanàna, goavana ny « fahazoana » ny tanàna io andro io. Ireo no miaramila Siriana niala an-daharana.
Tany ambava-ady mihitsy ireo lehilahy ireto tao amin'ny manodidina an'i Ar-Rastan tamin'ny 27 septambra hatramin'ny 5 Oktobra. Ilay tanàna, any amin'ny 20 km avaratr'i Homs, vohitra lehibe ao afovoan'i Siria, dia lasibatry ny fanafihana mahevy vaikan'ny tafiky ny governemanta taorian'ny fitsoahana an-daharan'ny antokon-tafika roa. Andiany mandeha fiara manodidina ny 250, notohanan'ny angidimby, no nandray anjara tamin'ny fanafihana sy n y fanaovana savahao. Manatrika azy ireo, ireo miaramila niala an-daharana sy ny mponina mitam-piadiana, araka ny filazan'ireo vavolombelona. Niverina eo ambany fifehezan'i Damas n y tanàna taorian'ny fifandonana mahery vaika  ary ny fitànana ireo olona 3.000 any amin'ireo trano sekoly sy fametrahan'entana  taorian'ireny fifandonana ireny no isan'ny tena henjana indrindra nisy teo amin'ity firenena ity hatramin'ny niandohan'ny fitroarana.
Tany amin'ny faritr'i Deir-Ezzor, tanàna lehibe any andrefana, no nisedra ny tena fahatairany voalohany ny fitondrana. Faran'ny volana Jolay, taorian'ny famonoana manamboninahitra tanora maro tao amin'ny akademia miaramila ao Homs  (sary henjana be), dia andiany miaraka amin'ny fiara mifono vy avy amin'ny diviziona faha-3 no nanampy ireo mpiala an-daharana tao Deir-Ezzor sy ny manodidina azy, nivezivezy mihitsy niaraka tamin'ny fiaran-dry zareo tao Al-Boukmal,  eo an-tànan'ny mpanohitra.
Io angamba no tena sorapiankohonana milaza ny fahaterahan'ny tafika siriana mahaleotena  (ASL), izay ny fiforonany, nataon'ireo manampahefana mpihoko, dia nambara efa ho andro vitsivitsy tany aloha. 
Zavatra namafisin'ny mponina iray tao an-tanàna, izay nilaza fa »tsy mahagaga intsony ny mahita; vao mangiran-dratsy, fiaran'ny mpitandro filaminana kila forehitra satria latsaka tanaty velam-pandrika nandritra ny alina». Fanafihana izay tondroina fa nataon'ny ampahany efa malaza avy amin'ireo mpihoko, ny katiba Khalid-ibn-al-Walid , tarihan'ny manamboninahitra iray fahiny tao amin'ny hery manokana: lehilahy an-jatony eo ho eo  notsinjaraina ho vondron'olona 10 hatramin'ny 30 izay manomboka miseho vahoaka matetitetika.
« Na dia tsapantsika aza ny hetaheta handray fiadiana na hiantso fidirana an-tsehatry ny tafika, dia lavinay io fepetra io. Ny fanafangaroana ny resaka tafika amin'ny hetsi-panoherana dia handemy tsikelikely ny fahamboniana ara-moraly izay nanamarika ny revolisiona hatrany am-piandohany», hoy ny Komity mpandrindra avy ao anatiny ao Siria  nampahatsiahy tamin'ny volana lasa, iray amin'ireo tambajotra isan'ny milina manodina ny hetsi-panoherana, mpikambana ankehitriny ao amin'ny Filankevi-pirenena Siriana. Nolanjalanjaina ny teny, nefa ho an'ireo mpanara-dia ny hetsika ho amin'ny fampiraisana sy ivondronan'ireo karazam-pinoana samihafa, ny fikisahana mankamin'ny fanoherana mitam-piadiana, hatreto, dia heverina ho zavatra mamoa-doza.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2011/10/24/24346/
 13 lahy no mamakivaky ireo olona marobe mihorakoraka: https://www.youtube.com/watch?v=cdBKtczPISM&feature=player_embedded
 Niverina eo ambany fifehezan'i Damas n y tanàna taorian'ny fifandonana mahery vaika: http://www.youtube.com/watch?v=WYNdJDU4kqA&feature=player_embedded
 ny fitànana ireo olona 3.000 any amin'ireo trano sekoly sy fametrahan'entana: http://www.lccsyria.org/1976
 famonoana manamboninahitra tanora maro tao amin'ny akademia miaramila ao Homs: http://www.youtube.com/verify_age?next_url=http%3A//www.youtube.com/watch%3Fv%3DAKgEoHalyZk%26feature%3Dplayer_embedded#at=15
 nivezivezy mihitsy niaraka tamin'ny fiaran-dry zareo tao Al-Boukmal,: http://www.youtube.com/watch?v=RjvWpnOSOtk&feature=player_embedded
 voadaroka baomba ny tanàna.: http://www.youtube.com/watch?v=mqpOLy6qBfo&feature=player_embedded#!
 tafika siriana mahaleotena: http://www.facebook.com/freesyrianarmy1?sk=info
 efa ho andro vitsivitsy tany aloha.: http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=SZcCbIPM37w
 lehilahy an-jatony eo ho eo: http://www.youtube.com/watch?v=_1HM6KQC8FY&feature=player_embedded
 Komity mpandrindra avy ao anatiny ao Siria: http://www.facebook.com/LCCSy
 Sampana Siriana ho Fanarahamaso ny Zon'Olombelona.: http://www.syriahr.com/
 Tambajotram-Baovao Shaam : http://www.facebook.com/ShaamNews